IINDIDI ZEGRAVEL (ISIKHOKELO SOKUTHENGA SOKUGQIBELA) - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Iindidi zeGravel (Isikhokelo sokuthenga sokugqibela)
Iindidi zeGravel (Isikhokelo sokuthenga sokugqibela)
Wamkelekile kwiindidi zethu zegrabile isikhokelo sokuthenga kubandakanya iimveliso ezahlukeneyo kwaye yeyiphi eyona ilungele iiprojekthi zakho zasekhaya.
Ukukhetha igrabile yegadi yakho okanye iprojekthi yokulungisa umhlaba kunokuba ngumceli mngeni. Elona nani likhulu lokukhetha ekufuneka liqwalaselwe linokuba nzima.
Ngezicelo ezininzi ezahlukileyo kubalulekile ukufumana iintlobo ezichanekileyo zegrabile, ukugcina imali, ukomeleza ukuhlala ixesha elide, kunye neprojekthi ejonge konke okusemandleni.
Zithini iintlobo ezahlukeneyo zeGravel?
Isiseko seGravel # 3
Into # 4
IJersey Shore Gravel
# 57 Amawa
Ilitye eliSiqhekekileyo # 411
Yimalini ukulahla iTruckload yeNdleko zeGravel?
Ezona zicelo zibalaseleyo zeGravel
Iidriveways kunye neNdlela
Ndifuna iGravel engakanani
Zingaphi iiyadi kwiToni yeGravel
Yimalini iYard yeGravel yokulinganisa
Yeyiphi iGravel yeyona ilungileyo kwiDriveway?
Yintoni i-Type 2 Gravel?
Igravel lilitye nje elityumkileyo okanye ilitye. Ixhaphake kakhulu njengezinto zokwakha kunye nokuhombisa umhlaba. Iidiphozithi zegrabile zikhona kwindalo apho amatye aye akhukuliseka kunye nemozulu; ezi dipozithi zibizwa ngokuba ‘yimingxuma yamatye.’
Igravel nayo inokwenziwa ngumntu, kwaye le nto kubhekiswa kuyo ‘njengelitye elityumziweyo’ Ukwenza ngobugcisa ukwenza igrabile oomatshini abasebenza nzima kusetyenziselwa ukuqhekeza amatye amakhulu abe ziingceba ezincinci. Phantse naliphi na ilitye linokusetyenziselwa ukwenza igrabile, kodwa awona matye aqhelekileyo sisanti, ilitye lekalika kunye nebasalt.
Ezi ziqwenga ziyahlelwa kwaye zithengiswe ngokobungakanani. I-Gravel yinto ephathekayo enezinto ezininzi ezisetyenziswayo, kubandakanywa ukukhukhula kunye nokulawulwa kwamanzi, ukulungiswa komhlaba kunye nokudala i-driveway.
Kuba igrabile ligama ekubanjwayo kulo naluphi na uhlobo lwelitye elityumkileyo, zininzi, zininzi iintlobo ezahlukeneyo, kwaye akusoloko kulula ukuzigcina zichanekile.
Enye into, banamagama avakala ngathi ziiprojekthi zikarhulumente ezichaziweyo, ezinje nge-Item # 4, Base Gravel # 3, kunye # 57 Crushed Rock. Yintoni eyahlula olunye uhlobo lwegrabile kolunye?
Ubungakanani, kwinto enye. Uhlobo ngalunye lwegrabile lunxulunyaniswa nobukhulu belitye elithile. IJersey Shore Gravel, umzekelo, ihlala yenziwe ngamatye ajikeleze ¾ ubukhulu.
Enye into emisela uhlobo lwegrabile ukwakhiwa. Ezinye iimveliso zegrabile zenziwe ngamatye kuphela, ngelixa ezinye zinezinto ezifana nesanti, udongwe, okanye uthuli lwamatye oluxutywe.
Ubungakanani kunye nokwakhiwa kwegrabile kumisela ukuba luhlobo luni na, kwaye inokusetyenziselwa ntoni ngokufanelekileyo. Funda malunga neenkcazo zeentlobo zegrabile kunye nokusetyenziswa kwazo.
Njengoko igama lisitsho, olu hlobo lwegrabile luhlala lusetyenziselwa ukwenza isiseko okanye isiseko sendlela yegrabile.
Ubungakanani bazo (enye ukuya kweesentimitha ezimbini ububanzi) kunye nokumila (okungaqhelekanga) kudala umaleko oqinileyo, ongatshintshiyoyo onika nomsele owaneleyo.
Abemi bendawo bacebisa ukuba iigravel driveways ixhaswe zii-intshi ezine zelitye elisezantsi njengeGravel # 3.
Inkangeleko ayinamsebenzi, njengoko iya kugutyungelwa ziindidi ezintle zegrabile.
Le mveliso ngumxube wamatye, isanti kunye nodongwe. Amatye achazwa njenge 'golf-size size' kwaye anobubanzi obuyi 1 - 2..
Isanti kunye nodongwe zinceda olu luhlu lwegrabile ukuba lube yindawo epakishwe nzima, ukuyenza ukuba ibe ngumaleko ofanelekileyo ophakathi kwindlela yegrabile.
Iigravels ezincinci ngaphandle kwesanti kunye nodongwe zihlala zitshintsha phantsi kobunzima besithuthi, ke umaleko ophakathi wemveliso yegrabile efana nomba # 4 uyafuneka ukulwa loo nto.
Iitshipsi zeMarble zombini ziyamkholisa kwaye zisebenza umsebenzi wokusetyenziswa. Ukwenza iitshipsi zemabhile, imarmore emhlophe ichotshozwa ematyeni amancinci.
Ezi chips zinokusetyenziswa njengomaleko ophezulu kwindlela yegrabile okanye indlela, kwaye zixabisekile ngenkangeleko yazo emhlophe ecekeceke kunye nendlela ebengezela ngayo elangeni.
Iichips zemarble zingasetyenziswa egadini, endaweni yesigcina-kufuma. Ayizukubonakala intle kuphela kwaye inqanda ukukhula kokhula, kodwa iyakuthintela izinambuzane ekufumaneni ikhaya kwizityalo zakho.
Eyona gravel yexabiso lisezantsi yaziwa ngamagama amaninzi. Ziquka; Inkqubo yekwari, inqanaba le-dense aggregate, ilitye lendlela, kunye nokuchoboza kunye nokubaleka (ngamanye amaxesha kubhalwe ngokungachanekanga njenge 'crusher run'.)
Ayisiyeyona nto inomtsalane kwaye inepesenti ephezulu yothuli lwamatye. Amatye, ubukhulu becala, makhulu. Le gravel isetyenziswa njengesixhobo sokugcwalisa xa kugqitywa ukumbiwa okanye njengobungakanani besiseko sendlela.
Uphawu lokutyikitywa kweJersey Shore gravel ngumbala wayo omthubi, okhangeleka ngathi yintlabathi kumanxweme aseNew Jersey. Iyafumaneka ngo ¾ kunye ⅜ ngobubanzi.
IJersey Shore gravel ifunyenwe kwimigodi yegrabile. Izinto eziliwa phantsi kwamanzi emigodini zimpompozwa kwinqaba, apho ihluzwa ngobukhulu obahlukeneyo.
Izinto eziguquguqukayo nezityebileyo zithandwa kakhulu kwiidriveways kumantla mpuma eMelika. Kule ndawo, iJersey Shore yenye yezona ndlela zibiza kakhulu zegrabile. Ihlala isetyenziswa njengendawo yokuthambisa, okanye njengomda weegadi ukuthintela ukhukuliseko lomhlaba.
Olu hlobo lwegrabile lwenziwe ngamatye agudileyo. Zingabancinci njengo-⅜ okanye zibe nkulu njenge-5 ububanzi. Kwimvelo, amatye aqhekeka kulwakhiwo olukhulu ngenxa yokhukuliseko lomhlaba kufutshane namanzi.
La maqhekeza amatye amancinci ahanjiswa ezantsi ngumfutho wamanzi, awiswe kwaye agudiswe endleleni. Iliwa lomlambo elenziweyo lenziwa ngokuwa kunye nokupholishwa kwamatye koomatshini.
Umbala uyahluka ngokombala wedwala loqobo. Iliwa lomlambo ligudile kwaye likulungele ukuhamba kodwa linokutyibilika. Igrabile encinci yomlambo omncinci ihlala isetyenziswa kumabala okudlala kuba ayinayo imiphetho edibeneyo enokwenzakalisa umntwana.
Iliwa elikhulu lomlambo lisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwiindawo ezijikeleze amanzi, ezinje ngamachibi, imithombo kunye neengxangxasi. Umphezulu wayo omtyibilizi awuziboleki ekusebenziseni indlela.
Ifumaneka kwiidayimitha ze ⅛ ukuya ku ⅜, okanye malunga nobungakanani bepea, olu hlobo lwegrabile luza kuluhlu lwemibala, enje ngwevu, mhlophe, mnyama, kunye nerusi-mdaka. La matye amancinci alungele ukuzaliswa kwindawo ejikeleze amatye amakhulu.
Kuba i-ertyisi ye-ertyisi igcina ukufuma kakuhle kwaye inqanda ukukhula kokhula, abanye abalimi bayayisebenzisa endaweni yesigcina-kufuma. Ukufakela ngaphandle kwendlu yakho kunye nomda we-pea gravel kuya kunciphisa iigundane ekugqobeni apho, njengoko zingenako ukumba igrabile.
Njengamanye amatshe amancinci, i-pea gravel kufuneka iqulethwe ngokujikeleza okanye imida, okanye iya kuqhutywa kuyo yonke iyadi yakho ngemvula yokuqala enzima.
Amatye afakwe kumthwalo wamatye angama- # 57 aya kuba rhabaxa kubume kwaye aqale ukusuka ku-½ ukuya ku-1 ubukhulu.
# 57 amatye anokusetyenziswa njengobungakanani besiseko sendlela yegrabile. Ezi ntlobo zamatye egrabile zisebenza kakuhle kakhulu kwaye zihlala zisetyenziswa njengendawo yokulala imibhobho.
Xa ilitye elingu- # 57 lixutywe nothuli lwelitye, imveliso entsha iyenziwa ibizwa ngokuba liLitye eliCujiweyo # 411. Le gravel workhorse isetyenziswa njengesiseko sokugcina iindonga, iidriveways, kunye neendlela zegrabile.
Ixesha elingaphezulu, uthuli lwamatye luhlala phakathi kwamatye, lubonelela ngozinzo olongezelelekileyo ngaphandle kokuphazamisa amanzi.
Enye yeerabile ezingabizi kakhulu ezikhoyo yinkqubo yekwari, ebiza, ngokomndilili, iidola eziyi-0.40 ngenyawo lesikwere.
Kwesinye isiphelo sexabiso lentengo yi-marble chips. Lindela ukuhlawula i-2.00 yeedola ngeenyawo zecala ngalinye.
Iliwa lomlambo libiza kancinci, umndilili weedola eziyi-1.50 ngenyawo lesikwere.
Isiseko sedwala, kubandakanya iLitye eliChotshiweyo # 57 kunye neLona Rock # 3, ngokubanzi zibiza malunga ne- $ 0.65 ngonyawo wesikwere, ngelixa i-pea gravel inokufumaneka nge-0.60 yeedola ngokomyinge.
IJersey Shore gravel inokubiza malunga ne-1.80 yeedola ngeenyawo zenyawo, kodwa ukuba uhlala ngaphandle kwempuma-mpuma yaseMelika, iindleko zokuhanjiswa zinokungavumeleki. UKUYA Uyilo lwegrabile yegrabile ingabiza malunga ne- $ 5 ngeenyawo xa ucinga ngexabiso legrabile esisiseko kunye neendleko zokufaka.
Indawo encinci yokuhlala i-patio yeenyawo ezingama-200 yayixabisa malunga ne- $ 1000. Eli xabiso linokuguquguquka ngokusekwe kwiintlobo zegrabile, indawo okuyo kunye neendleko zabasebenzi basekhaya.
Iilori zokulahla inkunkuma zinokubamba phakathi kweetoni ezili-13 ukuya kwezingama-25 zegrabile (kuxhomekeke kubukhulu / ubunzima begrabile), ezimalunga neeyhubhu ezili-14. Iindleko zothutho zihlala zincitshiswa ukuba uyalela ukuba umthwalo wegrabile ungahanjiswa kwilori yokulahla inkunkuma.
Indawo yokulahla ilori ngenkqubo yekwari kufuneka ixabise malunga ne-150 leedola, ngelixa ilori yokulahla inqwaba yeetshiphusi zemarble kufuneka ibize malunga ne-800 yeedola.
Ukuba uyalela ilitye lomlambo ngelori yokulahla inkunkuma, lindela ukuhlawula nge- $ 550.
Xa ulahla ilori yeJersey Shore Gravel, ixabiso lakho kufuneka libe kuma- $ 700. Iindleko kwilori nganye yokulahla ilori zimalunga ne- $ 250.
Zininzi izinto ezahlukeneyo zokwenza igrabile ekhaya. Nazi ezinye iindlela ezithandwayo.
Ngelixa unokumangaliswa kukukuva, igrabile yindawo efanelekileyo yezityalo ezikhula kumhlaba onamatye. Igravel yangasemva kwendlu Izitiya zixhaphakile kwimozulu yaseMeditera kuba ziyakwazi ukumelana nobushushu obugqithisileyo behlobo nehlobo elipholileyo nelibandayo.
Igravel ikhusela izityalo kwizitshabalalisi kwaye inqanda ukukhula kokhula, iyenza ithandwe ngabalimi abagcina ukutya okuncinci. Inceda ekuyekiseni ukhukuliseko lomhlaba, ke abagcini mhlaba bayayisebenzisa ekuhleleni iibhedi zeentyatyambo okanye iindlela zegadi. Kuba iphantsi kwegrabile yolondolozo yenza indawo enkulu ye ukulungiswa komhlaba entlango .
Igravel yaziwa kwimizi-mveliso yokwakha njengohlobo lohlanganiso. Umdibaniso yinto yokwakha eyenziwe ngamacandelo.
Eminye imizekelo yezinto ezihlanganisiweyo zibandakanya isanti, ikhonkrithi ebuyiselweyo, kunye ne-slag (imveliso yesinyithi esinyibilikisiweyo.)
Xa ukumba kugqityiwe, izinto ezihlanganisiweyo ezinjengegrabile zisetyenziselwa ukugcwalisa umngxunya ngaphambi kokuwugquma ngomhlaba ovulekileyo.
Oku kubizwa ngokuba yi 'backfilling', kwaye ngaphandle kwayo, umhlaba ongaphezulu kwendawo egrunjiweyo awuyi kuzinza, kuba ikhululwe yinkqubo yokumba kwaye ayisasebenzi.
Ikhonkrithi kunye ne-asphalt driveways ayinakulinganiswa, oko kuthetha ukuba amanzi akanakufikelela kumhlaba ongaphantsi. Oku kuhlala kukhokelela ekudibaneni emacaleni okanye esiphelweni sendlela yokuhamba, kwaye ngexesha lemvula enkulu, kunokuba negalelo kwizikhukula.
Igravel ikwenza kube lula ukubuyela kwamanzi emvula emhlabeni ngendlela efanelekileyo. Ingasetyenziswa njengomda phakathi kwengca yakho kunye nendlela yokuqhuba, ukuthintela ukudibanisa kunye nokhukuliseko lomhlaba, okanye yonke indlela yokuqhuba inokwenziwa ngegrabile.
Iindlela zingenziwa ngaphandle kwe-driveway okanye, apho kusetyenziswa khona amatye e-paving, anokunceda ekugcwaliseni izikhewu phakathi kwamatye kwindawo ephezulu yokuhamba.
Igravel ithengiswa ngokobunzima. Inani legrabile oyifunayo lixhomekeke kwiprojekthi oyigqibayo. Umzekelo, ukuqhuba kufuna igrabile ibe zi-intshi ezili-12 ubunzulu, ngelixa indlela elula yegadi ifuna ezine kuphela.
Eyona ndlela yokubala ubungakanani begrabile oyifunayo kukubuza umboneleli wakho. Banokuba nayo ikhalityhuleyitha eyafumaneka kwiwebhusayithi yabo enokwenza izibalo kuwe.
Rhoqo, ezi khalityhuleyitha zinokukuxelela ukuba zingaphi iingxowa zegrabile oza kuzidinga ukuzithenga, ubunzima bebonke begrabile kwiitoni, kwaye zinokukunika uqikelelo lokuhanjiswa. Iikhalityhuleyitha kunye neesayizi zeebhegi ziyahluka kancinci kumthengisi omnye komnye.
Indlela yokuqhuba eqhelekileyo ziikubhite ezili-16 ububanzi kwaye ziimitha ezingama-40 ubude kwaye ifuna i-intshi ezili-12 zegrabile. Ngokwabaxhasi begrabile abaliqela, iitoni ezingama-32 zegrabile ziya kufuneka ukugqiba umsebenzi.
Qaphela ukuba kwii-odolo ezinkulu (ngaphezulu kweetoni ezili-10) ngamanye amaxesha kuyabiza kakhulu uku-odola 'umthwalo ovulekileyo'. Eli litye legrabile eliziswa kwilori yokulahla inkunkuma ngaphandle kweengxowa ezizodwa.
Umgaqo wesithupha woku-odola igrabile kukuba itoni enye iya kugubungela, ngokomndilili, iinyawo ezingama-70 (~ 23 iiyadi zesikwere). Oku kucinga ukuba umaleko wegrabile owugalelayo umalunga neesentimitha ezintathu ubunzulu.
Ukuba uthululela umaleko ongekho nzulu wegrabile, enje nge-intshi enye ubunzulu, unokukwazi ukugubungela i-210 yeenyawo ezikwere (70 yeeyadi zesikwere).
Abathengisi begravel bahlala belinganisa inani legrabile ehanjiswayo kusetyenziswa iiyuby yards. Iikyubhi iyadi inezinyawo ezintathu ukuphakama, iinyawo ezintathu ububanzi, kunye neenyawo ezintathu ubunzulu.
Inobunzima malunga neetoni enye okanye iipesenti ezingama-2 200. Ukusasaza iisentimitha ezintathu ubunzulu, eli nani legrabile liya kugubungela malunga neenyawo ezili-100 zeenyawo.
Iindlela eziqhutywa ngamatye zidinga iintlobo ezintathu ezahlukeneyo zegrabile ukwenzela ukuxhasa izithuthi ezinzima ngaphandle kokutshintsha kakhulu.
Okokuqala, kubekwa isiseko esizi-intshi ezine zelitye elinobukhulu obungalinganiyo.
Uluhlu oluphakathi kweesentimitha ezintathu ukuya kwezine lwenziwe ngebhola yegalufa elingumxube oxutywe nothuli lwelitye, isanti okanye udongwe. Iinkozo ezincinane zezi zinto zigcwalisa izikhewu phakathi kwamatye, zisenza olu luhlu lomelele kwaye kungalindelekanga ukuba lutshintshe.
Ngaphezulu kwomaleko ophakathi (ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba 'ulunge') ngumaleko 'wokugqiba'. Oku kukwii-intshi ezine ubunzulu, kwaye amatye akakho makhulu kuneemabhule.
Ngokusekwe kuluvo oludumileyo igravel efanelekileyo yokugqibezela umgaqo wendlela yiPea Gravel kunye neJersey Shore gravel. Zombini ezi zinto zimbini zithandwayo zihamba ngendlela yegrabile njengoko zingabizi kakhulu kwaye zilungile ekuhambeni nasekuqhubeni.
Uhlobo lwe-2 lwegrabile ludibaniso lwamatye amancinci (angadluli kwi-1.5 ubukhulu) kunye nothuli lwelitye elisetyenziswa kwishishini lokwakha. Ayisetyenziswanga njengezinto zokuhombisa okanye zokuhombisa umhlaba.
Kuba iqulathe uthuli lwelitye, Chwetheza 2 igrabile iya kuhlala kwaye icekeceke ngakumbi kunamatye angabandakanyi uthuli.
Olona hlobo lusebenzayo kuThwala 2 kukugcwalisa imingxunya. Ingasetyenziswa ngabasebenzi beendlela ukuzalisa imingxunya. Iqela lokwakha lisebenzisa igrabile yohlobo 2 ukugcwalisa imingxunya kunye nemingxunya eshiye ngasemva emva kokwembiwa.
Ukuba unomdla wokudala ezakho izimvo zegrabile, kukho iintlobo ngeentlobo ze Uyilo lwesoftware yokuyila iinkqubo ezinokukunceda ubone iiprojekthi zakho. Ezi nkqubo zibonelela ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo zokukunceda wenze ngokwezifiso uyilo lwakho.
indlela yokwenza iqhina lokugoba
indlela yokubhiyozela isikhumbuzo ngexesha lokuvalelwa yedwa
amagumbi amahle amantombazana